Autopilot Inotangisa Insights, yeVatengi Rwendo Tracker yeVashambadzi | Martech Zone
Autopilot Inotangisa Insights, yeVatengi Rwendo Tracker yeVashambadzi
Chitatu, June 7, 2017 Muvhuro, Zvita 7, 2020 Douglas Karr
82% yevatengi yakamira kuita bhizinesi nekambani mu2016 mushure meyakaipa ruzivo maererano Mary Meeker yazvino Internet Trends Chirevo. Kushaikwa kwedata uye nzwisiso zvinogona kunge zvichitadzisa vashambadziri kubva kufambira mberi mumabasa avo: data nyowani inoratidza kuti Chetatu chevatengesi havana data uye analytics vanofanirwa kuongorora mashandiro avo, uye 82% yakati zvirinani analytics yaizovabatsira kufambira mberi mune ravo basa.
Autopilot Inotangisa Insights
Autopilot yakatanga Insights - yekutarisisa fitness tracker yevatengesi vanovabatsira kumisikidza, kuteedzera, uye kuzadzisa zvinangwa. Insights inoona zvibodzwa zvakanangwa uye metriki yakakosha (email kusaina, kupinda chiitiko, nezvimwewo), kuti uone kuti ndeapi mameseji uye chiteshi zviri kushanda, uye ichangoshandiswa neMicrosoft Developer Group pamberi pegore ravo RANGA musangano wekutevera uye kuzadzisa zvinangwa zvavo zvekusaina.
Insights inopa nzira kune vashambadziri kuti vafungidzire uye vateedzere mashandiro evavo vatengi nzendo vachipesana nechinangwa, zvakanyanya senge yekuteedzera fitness app. Mukati memasekondi makumi matanhatu, vashambadziri vanogona kuteedzera nzira dzinokunda, metric, uye mameseji anodikanwa ekushandura yakawanda mari uye kugadzirisa ruzivo rwevatengi zvirinani.
Pamusoro pe700 Autopilot vatengi vakapinda mukuyedzwa kwekutanga kweInsights, vaine inopfuura hafu vachiti Insights yakavabatsira zvakanyanya kuwedzera mashandiro erwendo, uye makumi manomwe nenomwe muzana vakati vava kunzwa chivimbo mukukanganisa kwekushambadzira kwavo.
Ndiine Insights, ini ndakakwanisa kuongorora minutia yedanho rega rega murwendo rwedu uye kugadzirisa pane zvave kushanda. Zvave zvakanaka chaizvo kubatanidza kukura kuri kuitika nebazi redu rekutengesa kudzokera kunzira dzekurera muAutopilot. Kevin Sides, CMO ye Shipmonk
Kiyi Insights Kugona Kunosanganisira
Goal tracking: Insights inobatsira kuunganidza zvikwata zvakakomberedza zvinangwa zvebhizimusi nekubvumira vashandisi mukana wekugadzira, kuzadzisa, uye kugovana kwavo rwendo rwekutendeuka zvinangwa mune mashoma mashoma.
Shanduko metric: Usatombofa warasa tarisiro kumagumo chinangwa - shanduko. Tarisa maitiro ekutendeuka uye uone kuti ndiani, uye nekukurumidza sei, mumwe munhu anoshandura chero nzira kubva kuemail kuenda kupositi.
Aggregate email performance: Tarisa uone maemail ako ari kuita uye kufambisa pane roll kumusoro, rwendo-chikamu. Ziva nguva dzakakosha nemazuva evhiki kuti utumire maemail nekutarisa mhedzisiro mukuwedzera kwakasiyana, uye kunyangwe kudzika sekuita kwemaawa.
Ziva meseji dzinokunda: Drill mune yega, multichannel meseji mhedzisiro pazuva-ne-zuva hwaro. Nyore kuenzanisa bvunzo dzeA / B uye sarudza vanokunda.
Autopilot inoonekwa yekushambadzira software yekuzvigadzirira vatengi mafambiro Nekubatanidzwa kwazvino kune Salesforce, Twilio, Chikamu, Slack, uye Zapier uye kugona kubatanidza kune anopfuura 800 maturusi-akavakirwa maturusi, isu tinopa simba vashambadziri kukurudzira hukama uye kukura vatengi vanobhadhara zvakanyanya vachishandisa email, dandemutande, SMS, uye yakananga tsamba dzekutumira .
Tags: Analyticsautopilotrwendo rwevatengimutengi rwendo rwekuteveraemail trackingnzwisisosalesforceChikamuusimbeTwiliozapper